Isa Tumbleweed projekiti mune yakavhurikaSUSE | Kubva kuLinux
Isa Tumbleweed projekiti mune yakavhurikaSUSE
kik1n | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Iyo purojekiti Tumbleweed inopa inoenderera ichivandudzwa vhezheni ye OpenSUSE, ine yazvino vhezheni dzakagadzikana dze software pachinzvimbo chekuvimba nenguva dzakasimba dzekusunungura yeiyo huru vhezheni. Ichi chirongwa ndecheavo vashandisi vanoda yazvino asi yakagadzika software
Musiyano ne fekitari, ndeyekuti Fekitori ine yazvino, kazhinji yekuyedza, software iyo isati yadzikamiswa uye inoda basa kuti ibatsire. Tumbleweed inopa yazvino vhezheni yakagadzika yezvishandiso yakagadzirira kushandiswa kwemazuva ese
Iyi pfungwa yakagara ichikurukurwa pane tsamba dzekutumira uye yakagamuchirwa nekuitwa naGreg Kroah-Hartman.
1 Isa Tumbleweed.
2 2) Gadziridza edu matsva ekuchengetedza.
Kamwe kuvhuraSUSE kwaiswa, isu tichaenda kuchinjisa zvinyorwa kuTumbleweed.
1) Wedzera zvinyorwa, kungave nekoni kana neYast:
Tumbleweed + Dzazvino Zvinyorwa:
sudo zypper ar --refresh http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/Tumbleweed/standard/ 'Kugumburwa'
sudo zypper ar --refresh http://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-current/repo/oss/ 'kuvhuraSUSE Yazvino OSS'
sudo zypper ar --refresh http://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-current/repo/non-oss/ 'openSUSE Yazvino isiri-OSS'
sudo zypper ar --refresh http://download.opensuse.org/update/openSUSE-current/ 'openSUSE Dzazvino uno'
Unofanira kuvhura yast uye tsvaga Software Zvinyorwa.
Rova bhatani Wedzera:
Sarudza sarudzo Tsanangura URL
Isa zita repositi uye isa iyo url yekuchengetedza mune ino kesi ichave iri:
Iye zvino yako nyowani nyowani ichaitwa Tumbleweed.
Pakupedzisira simbisa iyo repository.
2) Gadziridza edu matsva ekuchengetedza.
Kamwe nzvimbo dzekuchengetera dzaiswa, isu tichaenda kuzozvigadzirisa.
yako zypper Ref && zypper kumusoro && zypper dup
zypper Ref: Gadziridza ese akaomeswa marekodhi
zypper kumusoro: Gadziridza mapakeji neshanduro nyowani.
zypper kubiridzira: Ita yekuparadzira yekuvandudza.
Zvakanaka uye voila ivo vakavhuraSUSE Tumbleweed pa100%
3) Zvichida, ivo vanogona kubvisa zororo reiyo yazvino vhezheni yavanoshandisa kubva kuvhuraSUSE.
Mune ino kesi, ivo vanoenda kuYast uye voregedza iyo yakavhurikaSUSE xx.x repos
Pachave pasina dambudziko, vhuraSUSE Tumbleweed, inogona kusangana pamwe neyazvino vhezheni ye openSUSE.
VhuraSUSE Tumbleweed repositories.
KDE Yakawedzera Kugumburwa
vhuraSUSE Zvazvino kuvandudza
vhuraSUSE Yazvino isiri-OSS
vhuraSUSE Yazvino OSS
zypper ar -f http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Tumbleweed/Extra/ 'Yakawedzera Tumbleweed'
Iwe unogona kuwana zvimwe zvekuchengetedza pane yepamutemo openSUSE webhusaiti.
Batanidza Tumbleweed Repositories
Mushure mekuisa openSUSE:
zypper gadza chirema-gundi -0_10-plugins-base gstreamer-0_10-plugins-yakanaka gstreamer-0_10-plugins-yakanaka-yekuwedzera gstreamer-0_10-plugins-yakaipa-mavambo-addon gstreamer-0_10-fluendo-mp0 libxine10 libxine0-codecs libxine10-pulse w0codec-ese libdvdplay10 libdvdread0 libdvdnav10 libmad0 libavutil10 sox libxvidcore0 xvidcore libavcodec10 libavdevice3 libvlc2 lsb pullin-flash-player flash-player libquicktime2 tuxguitar chromium clementine chebriti dvdrip lxdvdrip gstreamer-zvishandiso gstreamer-plugins-libav gstreamer-2_32-plugins-gl mpg0 mpg4-ese fuseiso fusepod fusemb fusecompress isomaster glade cmake automake bluefish id4lib xine-ui xine-skins Q0Z iced tea-web java-51_4_52-openjdk kdenlive git python-pip arista handbrake-gtk transmageddon handbrake-gtk dvdstyler anorarama qtcurve-kde52 oxygen-molecule rar unrar unzip sharutil soundconverter kuriraConverter devede devede-lang inkscape inkscape-lang gimp-gap gimp-gap-lang gimp-ufraw
zypper gadza libxine2-codecs ffmpeg akaremara gstreamer-0_10-plugins-yakanaka gstreamer-0_10-plugins-yakaipa gstreamer-0_10-plugins-yakashata gstreamer-0_10-plugins-yakaipa-yekutanga-addon gstreamer-0_10-plugins-yakanaka-yekuwedzera gstreamer- 0_10-plugins-yakashata-yakabva-addon gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg libdvdcss2 flash-player dvdauthor07 gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-yakaipa gstreamer-plugins-yakaipa-yekutanga-addon gstreamer-plugins-yakanaka gstreamer-plugins-yakaipa-plugins gstreamer-plugins-yakashata-yakabva-addon gstreamer-plugins-yakanaka-yekuwedzera gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegdemux gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux k3b-codecs vlc smplayer xine-browser-plugin vlc-codecs
zypper gadza libxine2-codecs ffmpeg akaremara gstreamer-0_10-plugins-yakanaka gstreamer-0_10-plugins-yakaipa gstreamer-0_10-plugins-yakashata gstreamer-0_10-plugins-yakaipa-yekutanga-addon gstreamer-0_10-plugins-yakanaka-yekuwedzera gstreamer- 0_10-plugins-yakashata-yakabva-addon gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg libdvdcss2 flash-player dvdauthor07 gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-yakaipa gstreamer-plugins-yakaipa-yekutanga-addon gstreamer-plugins-yakanaka gstreamer-plugins-yakaipa-plugins gstreamer-plugins-yakashata-yakabva-addon gstreamer-plugins-yakanaka-yekuwedzera gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegdemux gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux vlc-gnome gnome-mplayer vlc-codecs
zypper gadza fetchmsttfonts mahara-ttf-mafonti
Kuti uwane mamwe mapakeji http://software.opensuse.org/search/
Kuti utarise kutsamira kwenherera.
su LC_ALL = C zypper se -s | fgrep '(Mapakeji eSystem)'
Kudzivirira yast kubva pakuvhara mushure mekuisa.
Yast> Sisitimu> / etc / sysconfig mupepeti> Sisitimu> Yast2> GUI> PKGMGR_ACTION_AT_EXIT
Pano, izvi nekukanganisa ndi [b] padyo [/ b] tinozvichinja kuita [b] Pfupiso [/ b]
Yangu yakavhurikaSUSE Tumbleweed desktop
Dhesiki rangu rekare:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Isa Tumbleweed projekiti mune yakavhurikaSUSE
Zvakashata kuti gwara rakanga risipo pandakashandisa openuse tumbleweed. Mupiro wakanaka kwazvo
Zvakanaka sei kuverenga chinyorwa nasahwira wangu kik1n, nenzira iyi yekuyedza distros kune zvimwe zvinowirirana isu tinogara tichishandisa kugovera kumwe chete uye tichizvibvunza mibvunzo imwechete uye kunetsekana nezve akasiyana maficha eLinux. Ino nguva tiri kushandisa OpenSUSE, icho chinyorwa chandiri kuzoverenga nekuverenga zvekare kuitira kuti ishandise Tumbleweed. Pasina mubvunzo kutaura, ini ndinotova nazvo muFavorites.
hehehehe 😀 Mazvita udos Kwaziwai.
zvakanakisa izvi zvinogona kundibatsira kana ndichiita bvunzo dzangu pamakumbo.
Manuel R. akadaro
Ini ndinoda maitiro ako eKDE anotaridzika, iwe ungandiudza here iyo desktop theme uye hwindo rekushongedza iwe raunoshandisa?
Pindura kuna Manuel R
FormaN uye Glassified.
Saka chingave chinotenderera distro? Zvinonakidza…
Ini ndaizofanira kuyedza OpenSuse zvakare. Nguva yekupedzisira (makore apfuura) ndakave neruzivo rwakaipa.
kune zvimwe zvese, zvakakwana, ini ndichazviedza mumuchina chaiwo :), ndatenda
Ha, ndakanga ndaneta nekungoverenga iyo posvo, dai ndaifanira kuita zvese izvo, ini ndoda mavhiki maviri kukiriniki yeSwitzerland kuti ndiwanezve
Nguva dzese pandinonzwisisa zvirinani nei Arch uye zvigadzirwa zvadzo zvichitsvaira zvese, kuita kwakawanda uye kuravira kwakanaka mudistro kunoshamisa 😀
Ini ndichiri kusarudza yakagadzikana yakavhurikaSUSE; ndichiona zvese izvo zororo ndipo pandinoona izvo zvinoshayikwa nedistro iyi.
Chinhu chekutanga ndechekuti rutsigiro rwayo ruri nani, ndinotya kutaura kuti chinofanira kunge chiri makore maviri, kuburitsa vhezheni nyowani makore maviri kana kusunungurwa kamwe chete kwegore, uye kune rimwe divi, batanidza nharaunda dzekare kuita imwe seFedora rpmfusion.
Ndakava nenguva yakanaka ne12.1, asi rimwe zuva ndichadzoka ..
Zvichakadaro, zve KDE ndine Rosa .. hehe ..
Hahahahahaha Ndinokutendai mose nekuda kwemashoko enyu, ndiyo yangu yekutanga blog post, uye kubva pane zvandinoona kana ndichiifarira. Ndatenda futi munhu wese, ndinotarisira kuenderera mberi nekubatsira pamwe nekubatana.
Kune avo vakashandisa openSUSE munguva yakapfuura kana vasina kugutsikana nebazi reRolling Release kana distro. Iyo yakagadzikana, yazvino, iri nyore kushandisa,…. Zvakasimba zvakakurudzirwa, ndanga ndichishandisa kuvhuraSUSE kwenguva yakareba zvakada kufanana neArch uye chameleon hainyadzise.
Hmm, ini handioni kuti kune akawanda marekodhi, asi haatyori zvachose. Ini zvakare ndinoshandisa repos kuyedza uye pasina dambudziko.
Kwaziso nekutenda nekuda kwemashoko ako.
Yakanaka kwazvo posvo.
Kutaurisa kwangu kwaive kwakanangana nehusimbe hwandakawana kushandisa Arch michina uye zvigadzirwa, kana iwe ukashandisa Arch - kana Chakra kana chero chimwe chinobva paArch - iwe unozokoshesa zvirokwazvo kureruka kweiyo _one_ yekumisikidza faira yezvinyorwa uye dhizaini uye nyore kweiyo pachavo.
Mazuva mashoma apfuura ini ndanga ndichishandisa 12.1 pane yangu server server ndichitsvaga yakakwana distro yekugadzirisa uye kushandisa pane ese maseva angu. Kunyangwe zvikaita yakanaka kwazvo pandiri - yakajeka uye yakajeka, YaST2 iri kutanga kuratidza kugona kwayo kweZombies dzakatama kubva paWindows, zypper inonakidza - Ndakaona kuti paive nemaphakeji mazhinji akange asipo uye kuti ndaifanirwa kuzviumbiridza - ls ++, vcp, cdu, dfc, bip, modes dzakasiyana siyana dzeEmacs uye dzakawanda, dzakawanda - uye kuti manejimendi padanho rekuparadzira reGNU + Linux, kwete yemasevhisi akapihwa (ayo aigona kuitwa kuburikidza neyekufananidzira YaST2, ncurses kana mitten) yaive zvakanyanya zvinorema, kunyanya kugadzirisa pakati peshanduro kana kuwedzera zvekuchengetera zvekunze, dingindira revatengesi mu / nezvimwe uye sekuti seDebian vano shit kumusoro uye vanosarudza dhairekitori uye chimiro chefaira chisingaenderane zvachose nezvinoburitswa kumusoro (nginx , apache, kusunga, postfix, nezvimwewo).
Pamusoro pezvese, iko kunetsa manejimendi evaseva avo ndiko kwakaita kuti ndiise parutivi, 12.1 yakandiratidza kuti ine mikana yakawanda kana vakagadzirisa zvimwe zvinhu.
Ah hongu, ini handisati ndawana chero chinhu chakaenzana kana chinodarika iyo AUR / CCR: mukana wekugona kuve necustom repositori nenzira isina basa zvinongoshamisa uye kuratidzira kune simba kwenzvimbo inogona kusimukira.
Izvo hazviwanzo kuti mamwe ese ekuparadzira haasati aisa chimwe chinhu chakafanana, pamwe nekuti havana kumbochishandisa uye havazive simba rayo uye kuchinjika.
Hehehe, ehe, ndanga ndichishandisa Arch kwemakore mana uye hongu, ini ndaida kupfava kwayo, asi ikozvino ndoshandisa muchina une kadhi reAti, husiku hunotanga (Zim). Ndosaka ndakachinjira kune rakadzikama distro kwandaive ndisina matambudziko nechavatyairi uye zvese zvakagadziriswa (Mumakore mana iwayo andakashandisa arch 4 kugadzirisa ivo vakaparadza distro).
Chengeta 4 kana zvimwe repos mu distro, gadzikana, kuyedza, git, chete kuvhuraSUSE uye Fedora uye ini ndaona kuti vanogona kuzvibata, vasina kutyora mapakeji. Sezvandinotaura, ini handisi kushandisa Mageia naRosa.
Iyo yakasimba poindi yeArch kwandinofarira, kuisa mapakeji kune kwandinoda, kwete zvekare kana zvishoma, kungofanana negentoo, asi mune gentoo magadzirirwo ayo akanyatsotsanangurwa (Munguva pfupi yapfuura uye yakabviswa gentoo kubva muchina wangu).
Amai distros saDebian naSlackware vakanaka kwazvo, asi vanoshaya iyo tsananguro, "Zvinokumbirwa nemushandisi."
Uffff, kuisa mbabvu senge freetuxtv muArch kunorwadza: kusachinja kutsamira, ita hupenyu neiyo chaiyo vhezheni yeglib nekuti haina kuumbiridza, kuti kana ENV isiri iyo inotamba vhezheni iyi, kurwadziwa. Zvikasadaro pfungwa yacho yakanaka, asi kuitiswa kwacho kunokundikana kakawanda. Ini ndinoda Opensuse Tumbleweed. Kurudyi-ruoko "kune vanhuwo zvavo" kunofanirwa kunge kuri kutenderera. Imwe nyaya ndeye maseva nenzvimbo dzekushandira…. Kwaziso.
Ini ndinofunga chinhu cheAUR chinonzi "kuvaka sevhisi" muOpensuse: v
kushamisika kwe zypper uye yum.
Kwandiri YUM inogona kunge yakangofanana neZypper kana yaive yakanyorwa muC pane Python.
Maneja wepakeji akagadzirwa muPython!? Handeyi nazvo !! Kungofanana neEmerge, iyo inotapira inotapira.
Kumusoro RPM uye YPM.
Panguva ino chaiyo ndiri kunyora kubva kuFedora 19 RC3 uye iko shanduko huru kana ichienzaniswa naFedora 18 .. Zvinotaridza kuti Fedora yadzokera kukosi yayo yekutanga ichidzidza zvakawanda kubva mukukanganisa kunonzi Fedora 18: D .. Ehe, ndinoshandisa XFCE :). Zvese zvinoratidza kuti RC3 yakanyatsosarudzwa seyekupedzisira vhezheni uye zvinoita sekunge Fedora 19 ichaburitswa zuva rechipiri risati rasvika uye zvinogona kunge zviri mangwana kana Svondo
Chero bedzi ivo vachigadzirisa mapakeji uye kutsamira, sekunge vari kuda kuinyora mune mono kana Java.
Wakatotaura nezve DNF pane iyo blog?
Kana zvisiri, senge wechipiri wemwedzi unotevera Fedora inobuda, ini ndichaiisa mune chaiyo uye ndoita ongororo 😀
Kuruma!? Inotapira zvakanaka pane iyo grill here? Unotakura isina lead kana dhiziri?
WTF ndeye DNF!?
Baba Google vari pamambure, digitized rive zita rako!
@ kik1n, zvakanaka mirira kuongorora.
Ehe, iyi blog inoita kuravira kukuru kweRPM.
Kutanga ne openSUSE.
Uff ndinorangarira izvi zviviri, inguvai dzakaipa dzavanondiisa kuburikidza (zvimwe kana ndichivaenzanisa ne pacman)
Wakaisa here kubva pa0, kana iwe wakavandudza?
Ndinoona kuti ine yakawanda yekushoropodza fedora 18, asi ini ndakaita zvakanaka chaizvo pandakaishandisa. Ini handina iyo huru distro nekuti ini ndakavhuraSUSE 😀
Mhoro @ Kik1n,
gadza kubva ku0 asi mune yakapfuura bvunzo shandisa Fedup nemurairo fedup-ehl -network 19 pasina kana dambudziko uye kana iko kugadzirisa kwapera yum kugovera-kuwiriranisa -kusagadzikanapresto :).
Ehezve, zvakatora nguva imwechete sekuisa Fedora kubva ku0 pamwe neese mafomu andinoshandisa 😀
Eeee, Kwakanaka, ikozvino ndichaedza fedora 19.
Heino iwe chinongedzo cheRC3:
Ndatenda ingoisa iro peji 😀
Iyo RPM inopokana, ine pepuru ine yakanaka KDE, uye kubva paruoko rweKik1n!
Tarisira mberi kwazviri.
Hehehe, mutoro wakanyanya.
Asi ini ndichatanga naFedora 19, ona kuti zvinofamba sei.
Mhoroi, maita basa nekutumira. Ini ndaigara ndichifarira OpenSuse sezvo iwe uchikurudzira kwandiri pa taringa, chokwadi ndechekuti distro yemakore gumi. Ini handina kusiya Manjaro, iyo zvakare inoita senge kwandiri seyakanakisa pamwe neOpenSuse. Zvisinei, nekuda kwekushayikwa kwenzvimbo pamushini ndaifanira kuidzima: _ (, saka ndakaenda kune rima divi re software ndikanogara neWindows 10, iyo isina kushata zvachose nenzira, inokurumidza uye zvakanaka mawindo, ndinoreva nyore kwazvo uye nemitambo yese yaunogona kufungidzira, asi ini ndainakidzwa ne linux.
Zvakanaka, ndatenda nerubatsiro rwako. Kutsvoda
Ndichiri kushandisa Win8 uye ndinoida, chete yemitambo yemavhidhiyo haha.
Asi zvakanaka kuti waifarira kuvhuraSUSE.
Vladimir Luna Mendoza akadaro
Ini ndoda kuona kana ini ndinonzwisisa, ndinogona chete kushandisa iyo yakadonhedzwa repo, kune zvese? kusanganisira multimedia codecs, raibhurari yeDVD, uye default system mapakeji? ndiko kuti, chete nekuvandudzwa kudonhedzwa uye kwatova?
Mhinduro yako inokurumidza inokosheswa: D .. iya yekumisazve nekudzokorora, inopa husimbe
Pindura Vladimir Luna Mendoza
Iwe unoisa openSUSE, iyo vhezheni yaunoda uyezve wobva wawedzera iyo yakadonhedzwa uye yazvino zororo. Wagadzirira, iwe wakavhurikaSUSE Rolling Kuburitswa, ese mapakeji mune aya zororo, zvakanaka pamwe nepakman tumbleweed.
Gadzirisa Rsync kukanganisa "protocol vhezheni mismatch - iro rako rakachena?"
Bespin theme ye KDE yakafuridzirwa neOSX